2019-04-24 18:27:25 ,1.ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ Overs…
1.ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ Oversea Employment Service Company ကြီးအတွက်
(1) Office Staff F(5)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000
– ဘွဲ့ရ၊အသက်(၃၀)အောက် – အတွေ့အကြုံရှိသူ
(2) Office Helper M(5)Posts
– ဆယ်တန်းအောင်၊ဘွဲ့ရ၊အသက်(၃၀)အောက် – အတွေ့အကြုံရှိ၊မရှိ။ရန်ကုန်မြို့တွင်းသွားလာနိူင်ရမည်။ (3) Computer Operator M(3)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000
– ဆယ်တန်းအောင်၊ဘွဲ့ရ၊အသက်(၃၅)အောက် – Computer Word,Excel,Pagemaker,Photoshop – အတွေ့အကြုံရှိသူ
– အလုပ်ချိန်းမနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီ
– ပိတ်ရက်းစနေနေ့တစ်ဝက်နှင့် တနင်္ဂနွေပိတ်သည်။
– (30.4.2019)အင်္ဂါနေ့ မနက်(၁၀)နာရီ အင်တာဗျူးရှိပါသည်။
2.တာမွေမြို့နယ်ရှိ Construction Company ကြီးအတွက်
(1) Site Engineer M(3)Posts
– လစာ 350,000 – 450,000
– BE/AGTI (Civil) – နယ်သွားနိူင်ရမည်။ – အသက်(၄၅)အောက်၊အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ် – More Information
– အလုပ်ချိန်းမနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၆)နာရီ
– ပိတ်ရက်းတစ်ပတ်(၁)ရက်ပိတ်သည်။
– (27.4.2019)စနေနေ့ မနက်(၁၀)နာရီ အင်တာဗျူးရှိပါသည်
3.ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ Cosmetic Company ကြီးအတွက်
(1) Sale Manager M(2)Posts
– လစာ 500,000 – 700,000
– ဘွဲ့ရ Dip;in Marketing ပြီးသူ – အသက်(၂၇-၅၀)ကြား၊အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ်
(2) Sale & Marketing Staff M(2)Posts
– ဆယ်တန်းအောင်၊ကျောင်းကိစ္စကင်း – အသက်(၃၀)အောက်၊အတွေ့အကြုံ(၆)လ
– အလုပ်ချိန်းမနက်(၈း၁၅)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီ
– ပိတ်ရက်းတနင်္ဂနွေပိတတ်။
– (26.4.2019)သောကြာနေ့ နေ့လယ်(၁၂)နာရီ အင်တာဗျူးရှိပါသည်။
4.စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ Construction Company ကြီးအတွက်
– လစာ 300,000 – 400,000
– BE/AGTI (Civil) – ပဲခူးတိုင်းသာယာဝတီမြို့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် – အသက်(၃၅)အောက်၊အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ် – More Information
– (30.4.2019)အင်္ဂါနေ့ နေ့လယ်(၁)နာရီ အင်တာဗျူးရှိပါသည်။
5.ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ Stationery Distribution လုပ်ငန်းကြီးအတွက်
(1) Sale & Marketing Staff M/F(5)Posts
– ဆယ်တန်းအောင်၊မအောင်Computer Basic – အတွေ့အကြုံ(၆)လ၊အသက်(၄၀)အောက်၊နယ်သွားနိူင်ရမည်
– အလုပ်ချိန်းမနက်(၉)ညနေ(၅)နာရီထိ – ပိတ်ရက်းတနင်္ဂနွေ+အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။
– (29.4.2019)တနင်္လာနေ့ နေ့လယ်(၁၂)နာရီ အင်တာဗျူးရှိပါသည်။
6.မ/ဥမြို့နယ်ရှိTrading Company ကြီးအတွက်
(1) Marketing M(5)Posts
– အသက်(၃၀)အောက်၊နေ့လယ်စာကျွေး။မန္တလေးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် – More Information
– အလုပ်ချိန်းမနက်(၈း၃၀)နာရီမှ ညနေ(၅း၃၀)နာရီ
– ပိတ်ရက်းတနင်္ဂနွေတစ်ရက်ပိတ်သည်။
– (26.4.2019)သောကြာနေ့ မနက်(၁၀)နာရီ အင်တာဗျူးရှိပါသည်။
7.အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးအတွက်
(1) Sale Staff F(5)Posts
– လစာ 150,000 –200,000
– ဘွဲ့ရ၊အတွေ့အကြုံမလို – အသက်(၂၅)၀န်းကျင်
– (26.4.2019)သောကြာနေ့ မနက်(၁၀)နာရီအင်တာဗျူးရှိပါသည်။
8.ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ Digital Printing လုပ်ငန်းကြီးအတွက်
(1) DTP F(3)Posts
– အသက်(၃၀)အထက်Computer စာစီစာရိုက်ကျွမ်းသူ – More Information
– အလုပ်ချိန်းမနက်(၉)နာရီမှညနေ(၅)နာရီ – ပိတ်ရက်းတနင်္ဂနွေတစ်ရက်ပိတ်သည်။
– (26.4.2019)သောကြာနေ့ နေ့လယ်(၁၁)နာရီ အင်တာဗျူးရှိပါသည်။
9.ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ Special Bar ကြီးအတွက်
(1) Bar Supervisor M/F(3)Posts
– အလုပ်ချိန်းတစ်ရက်(၈)နာရီ
– ပိတ်ရက်းတစ်ပတ်တစ်ရက်ပိတ်သည်။
– (29.4.2019)တနင်္လာနေ့ နေ့လယ်(၁၁)နာရီ အင်တာဗျူးရှိပါသည်။
10.မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးအတွက်
(1) Senior Account M/F(3)Posts
– လစာ 350,000 – 500,000
– ဘွဲ့ရ၊LCCI Level III(UK),ACCA Part I – အတွေ့အကြုံ(၃)နှစ် Advanced Excel
(2) Data Entry M/F(3)Posts
– ဘွဲ့ရ၊Computer Basic – အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ် Advanced Excel
– အလုပ်ချိန်းမနက်(၈း၃၀)မှညနေ(၅)ထိ
– (27.4.2019)စနေနေ့ မနက်(၁၀)နာရီ အင်တာဗျူးရှိပါသည်။
Royal Job Agency Page မှခေါ်ယူနေသော အလုပ်ရာထူးနေရာများသည် ကုမ္ပဏီကြီးများမှ အမှန် တကယ်လိုအပ်နေသောကြောင့်ခေါ်ယူထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဖော်ပြပါအရည်အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီပါက သတ်မှတ်ရက်များအတိုင်း အင်တာဗျူးအတိအကျဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အင်တာဗျူး များဖြေဆိုပြီး အလုပ်အကိုင်ကောင်းများ ရရှိနိူင်အောင်လည်း ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသလောက် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။
အင်တာဗျူးများဖြေဆိုပြီးအလုပ်အကိုင်ကောင်းများ ရရှိနိူင်အောင်လည်း ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိ သလောက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။ အကယ်၍သတ်မှတ်ရက်များအတိုင်း အင်တာဗျူးမဖြေဆိုရပါ က#Hot_Line_Phone_09 257310803 ကိုဆက်သွယ်ပြီးတိုင်ကြားနိူင်ပါသည်ခင်ဗျာ။ အခြားအလုပ် အကိုင်များစွာကိုလည်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
#လျှောက်ထားရမည့်လိပ်စာအပြည့်အစုံမှာ အမှတ်(၁၈)၊ ၆လွှာ၊ဘီ ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်း၊ လှည်းတန်း၊ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
#လှည်းတန်းမှတ်တိုင်မှာဆင်းရန်– ပိတ်ရက်မရှိ နေ့စဉ်မနက်(၉:၀၀နာရီ)မှ ညနေ(၅:၀၀နာရီ)ထိ ရုံးဖွင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Certificate in Marketing Management သင်တန်း April (28)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့စမည်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဘယ်လုပ်ငန်းဘဲလုပ်လုပ် Marketing မကောင်းရင်ဈေးကွက်မှာနေရာကောင်းကောင်း မရနိူင်ပါဘူး။
လူတစ်ယောက်ဟာအလုပ်ရှာတဲ့အချိန်ကနေ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ထိ Marketing နှင့်ပညာရပ်နှင့်ကင်းလို့မရပါဘူး။
ကုမ္ပဏီကောင်းကောင်းမှာ လစာကောင်းကောင်း၊ ရာထူးကြီးကြီးရဖို့အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အချိန်ကစပြီး Marketing စလုပ်ရသလို၊ ကိုယ့်ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ၊၀န်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း ဈေးကွက်မှာ Market Share ရဖို့ Marketing ကအရေးကြီးပါလှပါတယ်။
ဒါကြောင့် Marketing ပညာရပ်တွေကိုအခြေခံကနေ သင်ကြားပေးသွားမယ့် Certificate in Marketing Management သင်တန်းကိုတက်ရောက်ထားဖို့သင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။
Certificate in Marketing Management မှာအသေးစိတ်သင်ကြားမည့်ခေါင်းစဉ်များမှာ-
– Consumer markets and industrial markets
– Boston Matrix – product portfolio analysis
– Factors determining the price decision
– Promotional objectives
– Promotion mix စသည့်ခေါင်းစဉ်များဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းအချိန်မှာ မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ (တစ်ရက်သင်တန်း)ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းပြီးပါက Certificate ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည့်အပြင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများနှင့် လည်းချိတ်ဆက်ပေးသွားပါမည်။
သင်တန်းကြေးမှာ (၂၅၀၀၀)ကျပ်ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးအပ်နှံသူ(၁၀)ဦးဟာ (၅၀၀၀)Discount ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားဟောင်းများအတွက် (၁၀၀၀၀)Discount ရရှိမှာမို့ (၁၅၀၀၀)ကျပ်သာ ပေးသွင်းပြီးသင်တန်းတက်ရောက်နိူင်ပါတယ်။
တောင်းဆိုမှုတွေများနေတဲ့ Certificate in Human Resource Management (One Day Training)တန်းလေးထပ်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေတစ်ရက်တည်းသာတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီး သင်တန်းအချိန်မှာမနက်(၉း၀၀)နာရီမှ ညနေ(၅း၀၀)အထိဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းပြီးပါက Certificate ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည့်အပြင် အလုပ်ပါအခမဲ့ရှာဖွေချိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
Certificate in Humanresource Management တွင်သေးစိတ်သင်ကြားမည့်ခေါင်းစဉ်များမှာ
– Performance Apprisal & Performance Management
– SMART Approach
– Motivation system
– Key Performance Indicator(KPI) စသည့်ခေါင်းစဉ်များကို သင်ကြားပေးပါမည်။
သင်တန်းကြေးမှာ(၂၅၀၀၀)ကျပ်ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးအပ်နှံသူ(၁၀)ဦးကို (၅၀၀၀)လျှော့ပေးပါမည်။
Certificate in Business Management သင်တန်းမှာဘာတွေသင်မှာလဲ?
– Principle of Management and Leadership
– Main Business Functions
– Organisational Objectives
– Type of Organization
– Franchising စသည့်ခေါင်းစဉ်များဖြစ်ပါသည်။
နှစ်လသင်တန်းတွင်သင်သောသင်ရိုးအတိုင်းအပြည့်အ၀သင်ပေးပါမည်။သင်တန်းတက်လိုသော်လည်း အချိန်မပေးနိူင်သောသူများအတွက် တစ်ရက်အချိန်ပေးရုံနဲ့ Certificate ရရှိပါမည်။
တကယ်တက်မြောက်ဖို့ တာဝန်ယူပါသည်။သင့်တာဝန်ကသင်တန်းအချိန်မှန်လာတက်ရုံဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူများအနေဖြင့် Business Idea များကို သင်တန်းကျောင်းမှ ဆရာများနှင့်အခမဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိူင်ပါသည်။
သင်ကြားမည့်သူမှာ – Daw Hlaing May Win (B.Com /MBA)
သင်ကြားမည့်သူမှာ – Daw Yin Yin Htwe ( BBA / MBA)
သင်ကြားမည့်သူမှာ – U Chantha Htun (Managing Director/Royal Job Company)
This entry was posted in Job Vacancy on 2019-04-24 by admin.
← 2019-04-24 17:57:22 ,Daily Express Delivery Service… 2019-04-24 19:47:21 ,1.မ/ဒဂုံမြို့နယ်အခြေစိုက် လုပ်… →
2019-07-09 19:54:33 ,ဇော်မြန်မာအေဂျင်စီမှ၁၀ရက်နေ့အင…
2019-07-09 19:54:27 ,ပရိဘောဂတပ်ဆင်သောအလုပ်သမား ရှာပ…
2019-07-09 19:54:02 ,မင်္ဂလာပါခင်ဗျအလုပ်အကိုင်သစ်ေ…
2019-07-09 19:52:14 ,(10.7.19) တိုက်ရိုက် Interview…
2019-07-09 19:50:53 ,Urgent Positions အလုပ်ချိန်န…